Nagu saabsan - Shandong Drick Falanqaynta Qalabka Co., Ltd.
Shandong Drick Falanqaynta Qalabka Co., Ltd. waxay ku takhasustay cilmi baarista, wax soo saarka iyo adeegga farsamada ee sheybaarka iyo Qalabka Imtixaanka Warshadaha.
Waxaan sidoo kale u adeegnaa wakiil ahaan waxaanna u fidinnaa adeegga tijaabada wax soo saarka shirkadaha adduunka oo dhan looga yaqaan suuqa Shiinaha. Intaa waxaa dheer, waxaan si firfircoon kor ugu qaadnaa shaqooyinka sida ganacsiga, taageerada farsamada iyo adeegga iibka kadib. Alaabtayadu waxay ka codsanayaan beeraha sida sameynta waraaqaha, baakadaha, daabacaadda; caag iyo balaastik; dharka iyo Warshadaha aan dunta lahayn; cunto, daawo iyo iwm.
Qalabka Falanqaynta Drick Co., Ltd. waxay heshay CMC (Shahaadada Sayniska ee Shiinaha) (Lambarka 01000127), Shahaadada Midowga Yurub ee CE, xuquuqda is-soo-dejinta iyo soo-dhoweynta ee PRC, iwm. badeecadaha waxaa loo dhoofiyay Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika, Australia, Midowga Yurub, Bariga Dhexe iyo Koonfur Bari Aasiya, iwm.
Ka dib aasaaskii, dhammaan shaqaalaha Drick waxay si wadajir ah u midoobaan, si adag u shaqeeyaan oo sidaas awgeed shirkadeenu waxay noqotaa mid takhasus u leh oo qaadata farsamada asalkeeda, iyada oo lagu leeyahay ilo farsamo oo ku filan iyo tayo sare leh. Shirkaddu waxay leedahay shaqaale suuqgeyn leh tamar iyo tayo sare leh iyo shaqaale taageero farsamo oo leh aqoon ku filan oo ku saabsan farsamada qalabka iyo farsamada la adeegsanayo. Ka sokow, waxaan sidoo kale haysannaa shaqaale adeegga iibka ka dib leh teknolojiyad guud iyo khibrado badan. Alaabooyin horumarsan, farsamo wacan, shaqo adag, adeeg niyadeed, dhammaantood waxay dhalaan dhaqanka gaarka ah ee Drick maanta.
Drick wuxuu had iyo jeer ku hayaa tiknoolajiyadda ugu dambeysa wuxuuna ku dadaalaa inuu siiyo alaabada ugu horumarsan macaamiisheenna Drick wuxuu xooga saarayaa tababarka tikniyoolajiyadda iyo horumarinta tayada shaqaalahooda. Oo sidaas darteed shirkaddu waxay u fidisaa adeegyo ugu dhow macaamiisha. Faa'iidooyinka ugu badan ee laga helay teknolojiyadda, waxsoosaarka iyo adeegyadu waxay macaamiisheenna u keenaan faa'iidooyin badan inta ay isticmaalayaan tikniyoolajiyadda iyo alaabada cusub.